ကျန်းမာရေးသုတ Archives - Page 83 of 87 - Latest Myanmar News
သင်္ဘေင်္ာပွင့်ကိုသုပ်စားလိုက်ပါ ဈေးထဲမှာ တစ်ခါတလေ”သင်္ဘောပွင့်”လေးတွေ ရောင်းနေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ သင်္ဘောပွင့်တွေကိုသုပ်စားတာကောင်းပါတယ်။ဆေးဘက်လည်းဝင်ပါတယ်။ သင်္ဘောပွင့်ကိုဘယ်လိုသုပ်စားကြလည်းဆိုတော့ အခါးဓါတ်လျော့သွားအောင်ရေနွေးနဲ့တစ်ရည်ဆူအောင်ပြုတ်ရပါတယ်။ ပြုတ်ပြီးတဲ့သင်္ဘောပွင့်ကိုငပိဆားlကြက်သွန်ထည့်lသံပုရာရည်ရွှဲရွှဲဆမ်းပြီး ငရုတ်သီးအစိမ်းနဲ့သုပ်စားကြပါတယ်။ ဘာအတွက်ကောင်းလည်း 1..ဆီးချိုသမားအတွက်အကောင်းဆုံးဓါတ်စာပါ။ 2..လေဖြတ်လေဖြန်းတာကာကွယ်ပေးပါတယ်။အဲဒီဝေဒနာရှင်တွေမကြာမကြာစားသင့်ပါတယ်။ 3..နှလုံးရောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ 4..ကင်ဆာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ 5..ကိုလက်စထရောကျစေပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျ စေပါတယ်။ 6..နှုတ်ကိုလည်းမြိန်စေပါတယ်။ 7..ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းအပြင်ရောင်ရမ်းတာမှန်သမျှ လျော့ကျစေပါတယ်။။ မှတ်ချက်။ ချင်းနှင့်မတည့်သည်ကိုသတိပြုပါ။ “ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ”ပြန်လည်မျှဝေပါတယ်ရှင် ThanZin Khing Unicode သင်ျဘငျေ်ာပှငျ့ကိုသုပျစားလိုကျပါ စြေးထဲမှာ တဈခါတလေ”သင်ျဘောပှငျ့”လေးတှေ ရောငျးနတောလညျးတှရေ့ပါတယျ။ သင်ျဘောပှငျ့တှကေိုသုပျစားတာကောငျးပါတယျ။ဆေးဘကျလညျးဝငျပါတယျ။ သင်ျဘောပှငျ့ကိုဘယျလိုသုပျစားကွလညျးဆိုတော့ အခါးဓါတျလြော့သှားအောငျရနှေေးနဲ့တဈရညျဆူအောငျပွုတျရပါတယျ။ ပွုတျပွီးတဲ့သင်ျဘောပှငျ့ကိုငပိဆားlကွကျသှနျထညျ့lသံပုရာရညျရှဲရှဲဆမျးပွီး ငရုတျသီးအစိမျးနဲ့သုပျစားကွပါတယျ။ ဘာအတှကျကောငျးလညျး 1..ဆီးခြိုသမားအတှကျအကောငျးဆုံးဓါတျစာပါ။ 2..လဖွေတျလဖွေနျးတာကာကှယျပေးပါတယျ။အဲဒီဝဒေနာရှငျတှမေကွာမကွာစားသငျ့ပါတယျ။ 3..နှလုံးရောဂါမဖွဈအောငျကာကှယျပေးပါတယျ။ 4..ကငျဆာမဖွဈအောငျကာကှယျပေးပါတယျ။ 5..ကိုလကျစထရောကစြပွေီးကိုယျအလေးခြိနျကြ စပေါတယျ။ 6..နှုတျကိုလညျးမွိနျစပေါတယျ။ 7..ခန်ဓာကိုယျအတှငျးအပွငျရောငျရမျးတာမှနျသမြှ လြော့ကစြပေါတယျ။။ မှတျခကျြ။ ခငျြးနှငျ့မတညျ့သညျကိုသတိပွုပါ။ “ကနျြးမာခမျြးသာကွပါစေ”ပွနျလညျမြှဝပေါတယျရှငျ ThanZin Khing
ဆီးချိုပျောက်တဲ့ ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်
ဖွားခင် ပြောတဲ့ ဆီးချိုကျဆေး ဆေးနည်းလေးပြောပြမယ်နော် … ဖွားမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ခွဲခန်းဝင်ခါနီး ဆီးချိုတွေတအားတက်နေလို့ ခွဲမဲ့အချိန် ရွေ့ထားရတယ်။ ဒါနဲ့ဘေးအခန်းက အသက် ၇၀ အရွယ်အဖွားတစ်ယောက်က ဆေးနည်းလေးပေးတယ်။ ဆီးချိုတက်ရင် ကွမ်းရွက်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူ ကိုက်စားလိုက် ချက်ချင်းကျတယ်တဲ့။ တစ်ကယ် စားလိုက်တာ နာရီဝက်အတွင်း ဆီးချို ၆၀၀ ကျော်တက်နေတာ ပုံမှန်နီးပါးထိပြန်ကျသွားပါတယ်။ တစ်ကယ်စွမ်းလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။ p.k..( သျှင်သေမင်း ) Unicode ဖှားခငျ ပွောတဲ့ ဆီးခြိုကဆြေး ဆေးနညျးလေးပွောပွမယျနျော … ဖှားမိတျဆှတေဈယောကျခှဲခနျးဝငျခါနီး ဆီးခြိုတှတေအားတကျနလေို့ ခှဲမဲ့အခြိနျ ရှထေ့ားရတယျ။ ဒါနဲ့ဘေးအခနျးက အသကျ ရ၀ အရှယျအဖှားတဈယောကျက ဆေးနညျးလေးပေးတယျ။ ဆီးခြိုတကျရငျ ကှမျးရှကျနဲ့ကွကျသှနျဖွူ ကိုကျစားလိုကျ ခကျြခငျြးကတြယျတဲ့။ တဈကယျ စားလိုကျတာ နာရီဝကျအတှငျး ဆီးခြို ၆၀၀ … Read more
ဟင်းနုနယ်၏ အံ့ဖွယ် အစွမ်း
အသည်းရောင်အသားဝါ၊ သွေးတိုး ဆီးချို၊ ဆီးကျောက်တည်ခြင်း၊လျှာနာခြင်းမှစ နို့ချောင်းပိတ် ကင်းဆိပ် အထွေထွေရောဂါပျောက်သည့် “ဟင်းနုနယ်”အစွမ်း ဟင်းနုနယ်ကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးသူသည်ဖန်ကွဲ မှန်ကွဲ သံစ မစူးမရှ ဓားဖြင့်ခုတ်သော်မပြတ်၊ ဟင်းနုနယ်ကိုခြံကြီးနှင့်စိုက်ပျိုးသူရန်ဖြစ်၍တစ်ဘက်လူကဓားဖြင့်ခုတ်တာမပြတ်သဖြင့် ဘာအဆောင်ဆောင်ထားလည်းမေးရာ၊ ဘာအဆောင်မှမရှိ ဟင်းနုနယ်နေ့တိုင်းစားတယ် ဆို၏။ မှန်ကို ဟင်းနုနယ်ဖြင့်တစ်ပတ် ခန့်ပြုတ်ပြီးဝါးစားကြည့်လျင် မှန်သည်မရှရုံတင်မက ကြေမွသွားသည်။ ရွာသူမလေး ကလေးမွေးရာဗိုက်ခွဲမွေး၏ဆင်းရဲသဖြင့် ကျက်ဆေးတွေလုံလုံလောက်လောက်မထိုးနိုင် မစားနိုင် ချုပ်ရိုးပြည်တည်ပြီးကွဲသွား၏ ဟင်းနုနယ် (၁၅)စည်း ကြက်သား(၄၅)ကျပ်သား နေ့စဉ် ထမင်းစားတိုင်းစား သူ့ချည်းလည်းစားရာ တစ်ပတ်အကြာ ချုပ်ရိုးပြန်စေ့ အနာကျက်လေ၏ သွေးတိုး ဆီးခ်ျိုဝေဒနါရှင်နေ့စဉ်တစ်လစားရာ ရောဂါပျောက်တာလက်တွေ့မြင်ရ၏။ ဆီးကျောက်တည်သူများ ဟင်းနုနယ်နေ့စဉ်ကြော်ချက်စားပါက ဆီးကျောက်တည်တာကြေမွသွားပါသည်။ ကိုယ်တွင်းကလီစာများ၊အနာမဖြစ်အောင်၊ဆီးဝမ်းသွေးလေမှန်အောင်အပူမလွန်ကဲအောင် ဟင်းနုနယ်ကစွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ နို့ချောင်းပိတ်လျင် ဟင်းနုနယ်အမြစ်ကို သွေး/ထုထောင်းကြိတ်ချေ၍ နို့အုံမှာလိမ်းပေးပါ ပွတ်ခြေပေး၊ အရွက်ကိုကြော်စားပါ၊နို့ထွက်ပါလိမ့်မည်။ လျှာနာလျင် ဟင်းနုနယ်မြစ်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့်သွေး လျာပွတ်ပေးကလျာနာပျောက်သည်။ … Read more
မိုးဦးကာလ. မျက်စိနာ မျက်စိခိုက်တာတွေအတွက်
မျက်စိရောဂါ အားလုံးနှင့် အပူရောဂါအတွက် ဒီနှစ် အပူချိန်အလွန်များတယ် ဆီးရောဂါအဖြစ်များတယ် ။ မိုးဦးကာလ. မျက်စိရောဂါ မျက်စိခိုက်ရောဂါတွေ ကျိန်းသေဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်။ မျက်စိမှုန် ၊မျက်စိသီ ၊မျက်ဝတ်များ ၊ မျက်ရိုးကိုက်၊ ရောဂါများမဖြစ်ဖို့ ဂရုစိုက်ရပါမယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ဖိုိ့ ဒီဆေးလေးသောက်ထားကြပါ။ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ထိရောက်မှုရှိသော ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ထန်းလျက် ၃၀ သား ၂။ ရှားစောင်းလက်ပတ် အနှစ် ၃၀ သား ၃။ မကျည်းမှည့် အနှစ် ၂၀သါး အားလုံးတေ၍ နေပူမှာ ၃ရက်လှန်း။ ညစဉ် ကွမ်းသီးတစ်ခြမ်းခန့်စား။ မျက်စိရောဂါအမျိုးမျိုး နှင့် အပူအားကြီးသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ဆရာကျော်လင်းအောင် ဟင်္သာတမြို့၊09777903111 Unicode မကျြစိရောဂါ အားလုံးနှငျ့ အပူရောဂါအတှကျ ဒီနှဈ အပူခြိနျအလှနျမြားတယျ ဆီးရောဂါအဖွဈမြားတယျ ။ … Read more
နေပြင်းပြင်းမှာ သွေးတိုးသလိုဖြစ်ပြီး ခေါင်းမူးလာလျှင်
နေပြင်းပြင်းမှာ သွေးတိုးပြီး ခေါင်းမူးလာလျှင် သွေးတိုးရောဂါရှိသူများ သွေးတိုးပြီး ခေါင်းမူးလာပါက အောက်ပါ သဘာဝနည်းများဖြင့် သွေးတိုးရောဂါ သက်သာသွားေ အာင် ပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ ၁။ ဒန့်သလွန်ရွက်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ထောင်းလိုက်ပါ။ အရည်ညစ်ယူပြီး လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းခန့်ကို သော က်လိုက်ပါ။ သွေးတိုးချက်ချင်း သက်သာသွားစေပါသည်။၂။သံပုရာသီးကို ခွဲလိုက်ပါ။ အထဲမှာ အစေ့များကို ၅ စေ့ခန့် ဝါးစားလိုက်ပါ။ သွေးတိုးချက်ချင်း သက်သာပါလိမ့်မည်။ ၃။ သံပုရာသီး ချက်ချင်းမရနိုင်ပါက သံပုရာပင်၏ အခေါက်ကို ဆေးကြောပြီး ရေနဲ့ သွေးပြီး သောက်ပေးနိုင်ပါသည်။၄။ဗန်ဒါရွက်အနု ၃၊၄ ရွက်ခန့်ကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ၅ မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပြီး သောက်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို လက်ဖက်ရည် ခွက် ၃ ခွက်ခန့် သောက်ပေးပါ။ ၅ … Read more
ရာသီဥတုကတော့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပူပြင်းလာပါပြီဒီတော့သက်သာစေသော မြန်မာ ရိုးရာနည်း ( အပူဒဏ် ခံနိုင်စေသောနည်း ) ရာသီဥတုကတော့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပူပြင်းလာပါပြီ။ အညာဒေသတွေကတော့ မိုးရိပ်လေရိပ်လည်း မမြင်၊ ရာသီဥတုကလည်း စင်တီဂရိတ် (၄၃-၄၅)လောက် နီးပါးလောက်ကို တက်နေတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ကွယ်လွန်နေကြကြောင်း သတင်းကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာဘဲဗျာ။ ရန်ကုန်မှာလည်း ကိုယ့်အိမ်မှာဘဲ နေရင်တော့ သိပ်မသိသာဘူးပေါ့ဗျာ။ အပြင်ကို ကိစ္စရှိလို့ ထွက်မိလိုက်ရင် တက္ကစီ စီးရတာကိုက ငရဲခံနေရသလား မှတ်ရတယ်။ မီးပွိုင့်စောင့်နေရလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ Traffic Jam ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ဖြစ် နေပူထဲကြာကြာရပ်နေရလေလေ၊ အပူဒဏ်ကို သေမတတ် ခံရလေလေဘဲ။ ကိုယ်တောင် ဒီလောက် အပူဒဏ် ခံနေရတာဆိုရင် တစ်နေကုန် ကားမောင်းနေရတဲ့ တက္ကစီသမားတွေရဲ့ ဘဝကို စာနာမိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း … Read more
အစာအိမ်လေနာအတွက် နနွင်းခါး အစာအိမ်ရောဂါ ၊ လေရောဂါ ရှိသူတွေအတွက် ဖြစ်စေ ၊ အလှအပ ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ချင်သူတွေအတွက် ဖြစ်စေ အဆင်ပြေစေတဲ့ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလွယ်လွယ်လေးပါ။ ဆနွင်းခါးနဲ့ပျားရည် 1 – ဆနွင်းခါး(လက်တဆုပ်)2– ပျားရည်(စတီးဇွန်း ၃ဇွန်း)3– ဆား (စတီးဇွန်းတဝက်) ၁။ ဆနွင်းခါးကိုညှက်အောင်ထောင်းပါ (ဆနွင်းခါးကိုသန့်စင်အောင်ဆေးဓားနဲ့ပါးပါးလှီးနေပူပူမှာခြောက်နေအောင်လှန်းရပါတယ်) ၂။ ဆားကိုလှော်ပါ ။ ၃။ ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီးပျားရည်ထည့်နယ်ပါ ။ ၄။ အရွယ်တော်လုံးပြီးအခြောက်လှန်းပါ ( တကယ်လို့ ရေရှည်ခံချင်ရင်တော့ အမှိုက်သရိုက်တွေကို ဂရုစိုပြီး ဖယ်ရှားပေးရပါမယ်။ ၅။ တနေ့ ၂လုံးသောက်ပါ (အစိုိတိုင်းလည်းသောက်လို့ရပါတယ်) အမျိုးသမီးတွေအတွက် သွေးသားသန့်စင်ပြီးအသားရည်စိုပြေလှပစေပါတယ်။ ။ ” နှစ်ရှည် ခေါင်းကိုက်ရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် ” … Read more
အိပ်ယာ နာအတွက် ကွမ်းသီးစိမ်း
အိပ်ယာ နာအတွက် လက်တွေ့ဆေး မေမေ အိပ်ယာထဲမှာ အနေကြာလာချိန်မှာဂရုစိုက်နေတဲ့ကြား လေမွှေ့ယာနဲ့ ထားသိပ်တဲ့ ကြားက အိပ်ယာနာ တွေဖြစ်လာပါတယ်။ လေမွှေ့ယာကြောင့်် မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟု သတိလက်လွတ် ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။ မည်းမည်း ဒဏ်ရာလို ရိတဲ့နေရာတွေ၊အရည်ကြည်ဖုကြီးတွေ ပေါက်လာတာပါ။မေမေ့မှာ ဆီးချိုရောဂါလည်းရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့မြို့ဆေးရုံက သူနာပြုတွေပြောတဲ့နည်းပါ။ “ကွမ်းသီးစိမ်းအထဲက ကွမ်းသီးဆံကိုကျောက်ပျဉ်မှာသွေးပြီး လူးပေးလိုက်တာ၊ ညလိမ်းမနက်ကျတော့အရည်ကြည်ဖုတောင် ရှာမရတော့ပါဘူး၊။ ချပ်သွားလိုက်တာ၊ ညိုတဲ့နေရာတွေလည်းကွာကျကုန်ပါတယ်။ အနာဖြစ်လည်းလိမ်းလို့ရတယ်ပြောပါတယ်။ လောလောလတ်လတ် ကျွန်မလက်တွေ့မို့မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ။ Shwe Sin Unicode အိပျယာ နာအတှကျ လကျတှဆေ့ေး မမေေ အိပျယာထဲမှာ အနကွောလာခြိနျမှာဂရုစိုကျနတေဲ့ကွား လမှေယေ့ာနဲ့ ထားသိပျတဲ့ ကွားက အိပျယာနာ တှဖွေဈလာပါတယျ။ လမှေယေ့ာကွောငျ့ မဖွဈနိုငျပါဘူးဟု သတိလကျလှတျ ဖွဈမှာစိုးလို့ပါ။ မညျးမညျး ဒဏျရာလို ရိတဲ့နရောတှေ၊အရညျကွညျဖုကွီးတှေ ပေါကျလာတာပါ။မမေမှေ့ာ … Read more
ဆီးကျင်.. ဆီးအောင့်..ဆီးအဖြူဖတ်ဖြစ်ခြင်းတို့ အတွက်
May 10, 2020 by Latest Myanmar News
စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းသက်သာစေမည့် “( ဆီးကျင်.. ဆီးအောင့်..ဆီးအဖြူဖတ် ) လ္ဘက်ခြောက်နှင့် သကြား စိမ်သောက်ပါ.. လ္ဘက်ခြောက် ၁ ခါခပ် သကြား ထမင်းစားဇွန်းနှင့် ၁ ဇွန်းခွဲ ရေ ဖန်ခွက် တဝက် နာရီဝက် စိမ်ထားပြီးမှ သောက်ပါ.. စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သက်သာပါမည်.. အမစိမ်းလဲ့ညို မှ ကျန်းမာရေးဒါနပြုပါသည်။ ။ ကျောက်ကပ်ကြောင့် ဆီးများခြင်း ဆီးနည်းခြင်း ဆီးပူ ဆီးနံ ဆီးဝါ ဆီးကျင် ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း အားလုံးအတွက်တော့ အညာဖက် ရေရှားတဲ့အရပ်မှာ သဘာဝပေါက်ရောက်တဲ့ ဆူးလေးပင်ကို အပင်လိုက် ၃ခွက် ၁ခွက်တင်ကြိုသောက်ပါ။ သဘာဝတရားကြီးက ရေရှားတဲ့အရပ် ကျောက်ကပ်မကောင်းကြလို့် အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတွေကုသဖို့ အပင်တွေပေါက်ပေးထားပါတယ်။ လူတွေက ဂေဟစနစ်ကို ဖျက်ဆီးပြီး အနာရောဂါတွေ လူကြောင့်ပဲဖြစ်ရတယ်။ ခရဒ်ဒစ် … Read more